रणवीर–आलियाको विवाहको नक्कली कार्ड भाइरल भएपछि… – Khabar Silo
रणवीर–आलियाको विवाहको नक्कली कार्ड भाइरल भएपछि…
Posted on October 23, 2019 Author admin Comment(0)
मुम्बई – आलिया भट्ट र रणवीर कपूरको अफेअरका बारेमा त धेरैलाई थाहा नै छ । यी दुईको बलिउडमा खुबै चर्चा हुने गर्छ । यतिबेला भने आलिया र रणवीरको बिहेको नक्कली कार्ड सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।
आलिया र रणवीरको बिहेको कार्डले फ्यानसमेत झुक्काएको छ । कार्डमा सगुन सेरेमनी राजस्थानमा हुने भनेर लेखिएको छ । जबकि, यो कार्ड पूर्ण रुपमा नक्कली हो । यसलाई फोटोशप गरेर बनाइएको हो ।यो कार्डमा आलिया र उनकी आमाको भनाइ बाहिर आएको छ । साथै मुकेश भट्टले पनि यसबारेमा मुख खोलेका छन् ।
भारतीय मिडियासँग कुराकानी गर्दै आलियाका अंकल मुकेश भट्टले भने, ‘आलिया यतिबेला फिल्मको छायांकनमा व्यस्त छिन्, मलाई देशभरबाट यो बारेमा बुझ्न फोन आइरहेको छ, यस्तो कहाँ हुन्छ? दुःखको कुरा यो हो कि, कार्डमा निकै गल्ती छन् ।’
यता आलियाले पनि यसबारेमा हाँस्दै प्रतिक्रिया दिइन् – के भनौँ ?
नक्कली बिहेको कार्डमा गल्तीहरु छन् । यतिसम्म कि नाममा समेत त्रुटि छ । अझ कार्डमा आलियालाई मुकेश भट्टकी छोरी भनिएको छ । जबकि, आलिया महेश भट्टकी छोरी हुन् ।
सोनिकालाई छोडेपछि रेखाले गरिन् शुष्मा कार्कीलाई फोन, शुष्माले गरिन् २ लाख दिने घोषणा (भिडियो हेर्नुस्)
Posted on December 15, 2020 Author khabar silo
युट्युवर तथा मोडल सोनिका रोकायको साथ छोडेपछि अहिले रेखा राईले आफ्नो छुट्टै युट्युव च्यानल संचालन गरेकी छन् । लामो समय सोनिकासंग काम गरेकी रेखाले अहिले सोनिकाको साथ छोडेकी छन् । सोनिकासंग ६ महिना बझागंमा बसेकी रेखा अहिले काठमाडौ फर्किएकी छन् । रेखा फर्किएपछि सोनिका पनि अहिले काठमाडौ फर्किएकी छन् । उनले आपुले संचालन गर्दै आएको […]
Posted on November 20, 2020 Author khabar silo
एजेन्सी । भारतका चर्चित कोरियोग्राफर प्रभुदेवाले सेप्टेम्बरमा नै विबाह गरि सकेका रहेछन् । उनले बिहारको बेस्ड फिजियोथेरेपिस्टसंग मुम्बईको रेजिडेन्समा गएको २ महिना अघि नै लुकिछिपी विबाह गरिसकेका रहेछन् । विबाहीत यो जोडी हिजोआज चेन्नाईमा बसेका छन् । प्रभुदेवाले यतिका दिनसम्म आफ्नो विबाहको खबरलाई सीक्रेट नै राखिराखेका थिए । खबरका अनुसार उनी फिजियोथेरेपिस्टसंग तब मिलेका थिए […]
रजनीकान्तलाई तत्काल प’क्राउ गर्न माग
भारतका दिग्गज कलाकार रजनीकान्तले हालै चर्चित सर्भाइभल शो ‘म्यान भर्सेस वाइल्ड’को सुटिङका लागि चर्चा बटुलेका थिए । हलिउडका कार्यक्रम प्रस्तोता बेयर ग्रिल्सको शोमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि देखिएका थिए अब रजनीकान्त पनि यो कार्यक्रममा देखिने भएका छन् । भारतका दिग्गज कलाकार रजनीकान्त स्टारर एपिसोडको सुटिङ कर्नाटकको बान्दीपुर नेशनल पार्कमा भयो । यद्यपि, यो कुरा […]
दक्षिण कोरियाले निर्माण गरेका होटलहरु भत्काउन किमको आदेश